Matatu eQ3: Asmodee Inozivisa Yakawanda Board Game Nhau - Spielpunkt - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Jonas Dammen | May 13, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau
Gadziriro dzechikamu chechitatu dziri kutekesherawo paAsmodee. Mumazuva mashoma apfuura, zvimwe zvakawanda zvitsva zvakaziviswa. Pamusoro pekuwedzera kwemutambo wenyanzvi, kune mutambo wemhuri une kunzwa kwezororo uye zvekushandisa kune vese vateveri vepuzzle.
Mumatsutso mazuva anova mapfupi uye kuchena zvakare. Zvisineyi neizvi, Asmodee yave kutotanga kutumbuka zvitsva zvekutanga kuti zviwanikwe zvizere muchikamu chechitatu. Kune zvekushandisa kune vatorwa vanochera matongo uye kutiza mutambo mafeni. Mutambo mutsva wemhuri wakaziviswa zvakare uchaendesa vatambi kumahombekombe eHawaii. Imwe yemitambo yakatoziviswa kutanga kwekota yechitatu. Mamwe maviri akarongerwa kuburitswa pakati pekota.
Kuchera Pasi - Mutambo uyu uchiri mutsva zvakanyanya kuti uve mumuseum
Mune ikozvino kuwedzera kwechipiri kuchera ivhu, zita"Iyi ndeyemu museum" inotakura, iyo galactic museum inovhura mikova yayo. Vashandi vechikwata vave kudzidziswa kuve madhairekitori emumuseum, zvichiita kuti zvigadzirwa zvepasi rebhuruu (Pasi) zvive zvakasarudzika. Kuwedzera kune mamwe ma modules mana (5-8), iyo inogonawo kusanganiswa nemamodule ekuwedzera kwekutanga, "Phase II". Marudzi maviri matsva ari kuuya muModule 5 "Vatsvaki neVatungamiriri". Madzinza eFeinmort (vatsvaki) vane kufarira kwakakosha mukuchengetedza hupfumi hwetsika. Izvi zvinovaita ivo vanonyanya kupa kune galactic museum. Mazz-Un Admiralty vanozivikanwa nehutungamiriri hwavo uye vanoremekedzwa zvakanyanya pachikepe chaamai. Module 6 (zvisinganzwisisike artefacts) inobvumira kuvakazve matekinoroji evagari vepasi vakatsakatika. MuGalactic museum (module 7), nhengo dzechikwata dzinofanirwa kudzidziswa kuve madhairekitori emumuseum anoratidza akasiyana ekugadzira uye kuita kuti museum ishanyire chiitiko chakasiyana. Iyo yekupedzisira module inopa mukana wekukurumidza kutenga uye kutengesa nemapop-up misika. Zvisinei, kubuda kwavo hakuzivikanwi.
Kufanana nemutambo wekutanga, kuwedzera kwacho kwakakodzera vatambi 1-4 vane makore gumi nemaviri zvichikwira. Nguva yekutamba inobva pamaminitsi makumi matatu zvichikwira. Kuwedzerwa kwakarongerwa kuburitswa kutanga kwekota yechitatu.
Maui - Tsvaga nzvimbo dzakanakisa pamahombekombe
Vagari nevashanyi zvakafanana vanokweverwa kumutambo mutsva wekuisa mataira maui pamhenderekedzo yegungwa. Vanoedza kuchengetedza nzvimbo yakanaka yematauro avo. Basa revatambi nderekuvapa rubatsiro rwekubatsira. Vatambi vanozadza mahombekombe avo pachavo nekuisa matauro pedyo nemvura kana mumimvuri yemiti nemaamburera. Ndiko kwaunowana zvibodzwa zvakawanda. Zvisinei, kungwarira kunorayirwa pano. Kana ikanyanya kuwanda munzvimbo idzi uye matauro ari kunze kwenzvimbo yakavanzika yemahombekombe, pane mapoinzi asina kunaka. Muchikamu chako iwe unosarudza tauro tile kubva pamusika uye woiisa pamhenderekedzo yako. Iyi ndiyo nzira iyo matauro ane maitiro akafanana akabatanidzwa. Neimwe nzira, madhora ejecha anogonawo kushandiswa. Aya anogona kuzoshandiswa gare gare kutenga mataira anonangwa. Mutambo wacho unopera kana mahombekombe ave ne12 tiles.
Kusiyana kwegakanje kunopa dambudziko rakawanda. Apa vatambi vanofanirwa kunzvenga magakanje.
Mutambo wemhuri unokurudzirwa vanhu 2-4 kubva pazera re8 uye nguva yekutamba ingangoita maminetsi makumi matatu. Zuva rekuburitswa rinopihwa sepakati pechikamu chechitatu.
Kiinura! Game Adventures - Nyura munyika yemitambo yakakurumbira
Iyo Unlock! yakatevedzana inopa kunzwa kwemakamuri ekupukunyuka pamba. Chete nemepu uye inotsigirwa neinopindirana app iyo inokutungamira murwendo uye inopa manzwi akakodzera, chaiyo yekutiza mutambo wekunzwa inogadzirwa pano. Kiinura! Game Adventures ibhokisi rechigumi mune yakabudirira Unlock! nhevedzano uye ine matatu adventures zvichienderana neakakurumbira bhodhi mitambo. Inoenda munyika yeZug um Zug, Pandemic uye Mysterium. MuChitima kuenda kuChitima Mafambiro, vatambi vanosangana nerwendo rwehupenyu hwese pavanenge vachifamba muUnited States. Mumutambo wePandemic, vatambi vanofanirwa kuchengetedza ramangwana revanhu nepo denda richityisidzira nyika. Iyo Warwick Manor ndiyo mamiriro ezvakavanzika adventure. Pano vatambi vanosangana nekuferefetwa kwakasviba kuzere nezviratidzo.
wo Kiinura! Game Adventures inofanira kubudiswa pakati pechikamu chechitatu. Mhosva nhatu idzi dzakakodzera 1-6 vanhu vane makore gumi zvichikwira. Iwe unofanirwa kuverenga neinenge maminetsi makumi matanhatu pane imwe nyaya.
Asmodee | Lucky Hans | Paleo - Kutanga Kutsva |... * 20,99 EUR tenga
Kare Zvidiki, zvinoshamisa uye zvine humwari: mitsva yekuunganidza mari mapurojekiti pamutambo forge
Inotevera Kutyisa kwakachena: 5 yakanaka bhodhi mitambo ine zombies
Immortals Fenyx Rising: Ubisoft inoburitsa kugadzira-yeiyo animation trailer
Billionaire deal: Embracer anoda kutenga Asmodee
PUBG: Nzvimbo dzekurwira dzakafarirwa sezvazvaive payakaburitswa: Thanks kune Yemahara-2-Play